Azịza UNWTO nye Kenya: Onye nwere ike ịkwụsị odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Azịza UNWTO nye Kenya: Onye nwere ike ịkwụsị odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • trending Ugbu a
A na-eme akwụkwọ ozi n'isi ụlọ ọrụ UNWTO dị na Madrid.
A na-atụ anya na akwụkwọ ozi a ga-asị NO na onyinye Kenya na-enye ịnabata Nzukọ Ezumezu.
Ugbu a ga-abụ ihe mgbawa megide njem nlegharị anya, arụmụka na ịchọ ọdịmma onwe onye naanị.
Ọ dị onye nwere ike ịkwụsị mmepụta akwụkwọ ozi a?
Mgbe UNWTO gwachara mba ndị otu na Morocco enweghị ike ịbụ ebe mgbakọ General Assembly na-abịa, Kenya n'otu ụbọchị ahụ nyere ohere ịnabata mmemme ahụ kama.
Kpọtụrụ site na Akụkọ kacha ọhụrụ Morocco FR, Zoubir Bouhoute, ọkachamara njem nlegharị anya na onye nduzi nke Provincial Tourism Council (CPT) nke Ouarzazate, na-akwa ụta maka mkpebi ndị a na-anọchite anya ọdachi maka njem nlegharị anya Moroccan nke na-agbalị n'ụzọ ụfọdụ iji gwọọ ọnya nke nsogbu Covid-19 kpatara.
Kenya bụ nke abụọ n'ahịrị mgbe Morocco, Philippines na Morocco nyere ohere ịnabata Mgbakọ General na GA ikpeazụ na St. Petersburg afọ abụọ gara aga. Ugbu a ọ bụ oge Kenya?
Ọ bụghị ihe nzuzo, na ịkwaga ihe omume ahụ site na Morocco laghachi Madrid bụ nnukwu ihe ịga nke ọma maka onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO na-achọsi ike.
N'ọnwa Jenụwarị, otu Council Executive Council gbakọtara na Madrid n'etiti ndekọ ndekọ Corona, oge ọ na-alọta, na ọnọdụ mberede ihu igwe. Ọ bụ ihe niile ịkwado Zurab Pololikashvili maka okwu nke abụọ dị ka SG. Ọbụna onye isi ala Zurab nke Georgia bịara kpọọ ndị nnọchiteanya niile na-eme ntuli aka ka ha rie nri abalị otu abalị tupu ntuli aka ahụ, na-ahapụ naanị onye na-eme ntuli aka megide Zurab n'ọchịchịrị.
Ndị ndọrọndọrọ 5 ọzọ nwere okwu gbasara usoro ọchịchị nke UNWTO Secretariat chọpụtara, enweghị ike ịnyeghachi akwụkwọ na mkpọsa megide Zurab n'ihi obere oge etinyere n'ọnọdụ na-eju onye ọ bụla anya.
Inwe Nzukọ Ezumezu n'otu obodo ahụ ga-ebulite ajụjụ nke ọbụna njọ karịa na usoro ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu. Nzukọ izugbe ga-eme ntuli aka na ndụmọdụ nke Council Executive wee kwado ya.
Ka ọ dị ugbu a, Zurab Pololikashvili pkere ọrụ abụọ na nso nso a ọnọdụ metụtara Saudi Arabia. Nke a butere esemokwu n'etiti Spain na Saudi Arabia gbasara ịnabata isi ụlọ ọrụ UN Affiliated Agency. Onye odeakwụkwọ ukwu UN tinyere aka na ya.
eTurboNews Otu akwụkwọ a pụrụ ịdabere na ya na UNWTO dị na Madrid gwara ya:
A na-edepụta akwụkwọ ozi nke UNWTO Secretariat na-edegara Minista Kenya taa, na-azaghachi onyinye nke minista na-anabata Ụlọ Nzukọ Ezumezu na Kenya.
A na-atụ anya na akwụkwọ ozi ahụ ga-ekele Minista Najib Balala maka onyinye amara ya iji kwado Mgbakọ General.
Akwụkwọ ozi ahụ ga-abụ NO n'ihi amụma oge, na-ezo aka na njedebe nke ụbọchị 40, n'agbanyeghị na Minista Balala zara UNWTO n'ime awa 24.
n'ime awa 24 nke Kenya na-eziga arịrịọ UNWTO Madrid na Sunday, ụwa na-akwadola Kenya n'azụ. Ọ bụ mkparịta ụka mbụ n'etiti ndị isi na kọmiti njem nlegharị anya Africa na Sọnde.
N'ịtụle ọnọdụ ahụ ka a na-ebo Zurab ebubo aghụghọ ntuli aka, na-emebi mba ndị otu na njem HQ, ọ ga-abụ maka ọdịmma ya ka ọ ghara ịkpata ọnọdụ ọzọ ebe mba ndị otu nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya na UNWTO bụ ihe niile gbasara ntuli aka ya, ọ bụghịkwa inweta njem nlegharị anya. laghachi na egwu.
Mgbe a jụrụ ya, Gloria Guevara, onye bụbu WTTC CEO na onye ndụmọdụ ugbu a na Minister nke Tourism maka Saudi Arabia kwuru. eTurboNews: "Ana m agbalị itinye aka ugbu a."
Taa nwere ike ịbụ ụbọchị ike Tuzdee maka UNWTO, Kenya, na World of Tourism.
Logan Levi ekwu, sị:
October 31, 2021 na 06: 10
Zurab Pololikashvili bụ odeakwụkwọ ukwu ọhụrụ nke United… votu iji zere "ihere" na "ịkwanyere iguzosi ike n'ezi ihe". Nke kachasị mkpa, mmachi na njem na-egbochikwa njem nlegharị anya iwepụta ikike ya iji wulite ọdịnihu ka mma maka mmadụ niile.